Cutter Dredge Nampiasaina ho fiarovana an'i Keta Sea any Ghana - Ellicott Dredges
18 inch (457 mm) «dredge suction» an'ny Ellicott®brand «Alabama» dia nanomboka ny tetikasan'ny Tetikasa Fiarovana ny Ranomasina Keta
Source: Tantara momba ny harena ankibon'ny tany sy ny asa fanamboarana
Marika Ellicott® 18 inch (457 mm) dredge suction cutter "Alabama" dia manomboka ny tetik'asa fiarovana ny tetikasa Keta Sea
Ny Keta Lagoon dia rano velona lehibe misaraka amin'ny ranon-tsiranon'ny Helodrano Guinea amin'ny alàlan'ny tany tery. Ity isthmus ity dia miaina fikaohon-tany henjana sy mitohy. Ny ampahany lehibe amin'ny fotodrafitrasa fonenana sy ho an'ny daholobe ao amin'ny tanànan'i Keta, anisan'izany ny lalana mampifandray azy amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy avaratra, dia very an-dranomasina. Ny velaran-tany eo anelanelan'i Keta sy Kedzie dia mihasasatra hatramin'ny 4.0 ka hatramin'ny 8.0 m / taona ary latsaky ny 50 m ankehitriny ny sakany any amin'ny toerana sasany. Raha ho voahitsaky ny ranomasina ny isthmus dia hitranga ny fiovana manimba ny sira sy ny fikorianan'ny ranomasina, ary misy vokany ratsy amin'ny fambolena any an-toerana, ny indostrian'ny jono, ny varotra ary ny toe-piainana isan'andro ho an'ireo monina ao Keta. , Vodza, Kedzie, ary ny manodidina. Toy izany koa, raha miakatra ny renirano Volta amin'ny fotoanan'ny orana, ny tondra-drano koa dia mety handrahona mafy ny tsy fivadihan'ny tontolo rano madio marefo. Ny faritany Avu-Keta dia mivelona amin'ny lagoon: ny fitehirizana azy dia dingana voalohany lehibe amin'ny famerenana ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ilay faritra. Ny minisiteran'ny asa sy ny trano fonenan'ny Repoblikan'i Ghana dia nitady ny hanaovana izany fitehirizana izany amin'ny alàlan'ny fiarovana sy ny fitoniana ny morontsiraka hatrany Keta ka hatrany Hlorve, amin'ny fampiharana tetik'asa mifandimby hamolavolana sy hanamboarana ireo fanatsarana ilaina. Ny tanjon'ity programa ity dia ny hisorohana ny fikaohon-tany sy ny tondra-dranomasina mitohy sy maharitra, manavotra ny tany avy amin'ilay lagoon hanitatra ny faritanin'ny tanàna sy ny vohitra, ary mampifandray an'i Keta amin'i Hlorve miaraka amin'ny làlana iray mirefy 8.3 km. Mba hahatongavana amin'ny vahaolana tsara indrindra dia nanao andiam-pianarana sy fitsapana i Great Lakes, izay namorona drafitra lehibe hamoronana vahaolana mahomby sy ara-tontolo iainana. Ny fizotry ny fisafidianana dia nihevitra ny valin'ny fitsapana matematika sy hydraulic, ny fahombiazan'ny rafitra, ny faharetany, ny fikojakojana, ny fahafaha-manao ary ny tontolo iainana, tontolo iainana ary ara-tsosialy. Ireo fandalinana ireo dia notarihin'i Great Lakes sy ireo mpifanaraka aminy Baird & Associates ary ny drafitra fikarohana sy ny fampandrosoana. Ny Tetikasa fiarovana an-dranomasina Keta dia manana singa famolavolana / fananganana efatra:
Fanamboarana lalana / lalana 8.3-km eo anelanelan'i Keta sy Hlorve, ny famerenana indray ny rohy very amin'ny fongotra. Ny fiarovana ny ranomasina dia miasa mba hamerana ny fitrandrahana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny moron-dranomasina miaraka amina renirano iray any ivelany ary fitoeran-tany gony, lakan-dranomasina fefilasy sy tora-pasika apetraka eo anelanelan'ny lakan'i groyne avy any Keta ka Hlorve. Ny fananganana rafitra fanaraha-maso ny tondra-drano mba hanomezana aina ny mponina manodidina ny lago noho ny tondra-drano be loatra. Fitrandrahana ny tany avy any amin'ny laguna any amin'ny faritra Keta, Vodza ary Kedzi, izay manome faritra ahafahana miorina trano sy trano.
Mampiroborobo ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampiasana maharitra sy manamafy ny fifaneraserana ara-tsosialy sy toekarena ny tetikasa. Ohatra, hisy ny faritany fanampiny ho an'ny fambolena, ary ny lalana / làlana dia manome sy manokatra indray ny lalana fitaterana mankany akaikin'i Togo sy ny tanànan'ny tanàna Ghanian, ny tanàna ary ny tanàna, manome ny tantsaha sy orinasa hafa any amin'ny faritra miditra amin'ny tsena. Ny tora-pasika vaovao sy ny faritry ny tanimbary vaovao dia hamorona faritra arovana izay ahafahan'ny mpanjono manondraka lakana, ary manome trano azo antoka amin'ny indostrian'ny jono faobe any amin'ny morontsiraka. Ny fiakaran'ny tondra-drano dia hampihena ny fahaverezan'ny tantsaha noho ny tondradrano ao amin'ny laguna, ary ny fananana indray ny tany dia hanome faritra vaovao ho an'ny fananganana trano, orinasa ary vondron'olona.
Farany, ny Tetikasa fiarovan-dranomasina Keta dia mitondra ny fisian'ny Amerikanina ara-barotra manara-penitra ao amin'ny toekarena andrefan'i Afrika Andrefana, izay mividy ny fividianana entana sy serivisy amerikana mihoatra ny US $ 75,000,000. Great Lakes dia nanampy tamin'ny fandaminana famatsiam-bola ho an'ny tetikasa miaraka amin'ny US Eximbank.
Fanombohana ny asa «dredging & Quarry» fiarovana an-dranomasina Keta
Ny dredge "Alabama" namboarina nosoratan'i Ellicott® International, nanomboka ny 18 May 457, dia nanala ireo fitaovana malemilemy tsy mifanaraka amin'ny fasika mindrana amin'ny ho avy ary manary nosy mifanakaiky. toeram-ponenana vorona. Navoakan'i Great Lakes ny "Alabama" niaraka tamin'ny firoboroboan'ny vatofantsika vaovao avy amin'ny Ellicott® International mba hanatsarana ny fahaizany miasa. Raha vantany vao nesorina ny faritra ampy amin'ny tranokala indramina, ny "Alabama" dia hanomboka hantsaka hameno ny rohy lehibe amin'ny arabe. Mitohy ny fanentanana ireo fitaovana sivily mavesatra sy kitapo fitrandrahana harena ankibon'ny tany, miaraka amina fandefasana farany ny Etazonia ny 30 jona. Vita ny tobin'ny trano fonenana ao Weta ary nobodoina, miaraka amin'ireo biraon'ny toerana misy ny fiantsonana an-dranomasina sy ny birao ary ny fanamboarana ny toeram-pitrandrahana. . Ireto hetsika manaraka ireto dia mandeha:
Fanetsehana CS 24 inch (610 mm) dredge "Utah" amin'ny sinoa rendrika Sha He Kou; Fandefasana fitaovana enti-mitrandraka avy any Houston sy Newark; Ny fitaterana ny làlambe 777 sy ny mpandeha 998 avy any Tema mankany amin'ny toeram-pitrandrahana; ny fanamafisana ny fantsom-by sy ny fiampitana amin'ny alàlan'ny lalana fitadiavana; ny fanitsiana sy ny fikojakojana ny lalana halavirana eo anelanelan'ny toeram-pitrandrahana sy ny toeram-piasana; Famotopotorana ny tany eny amoron-dalana sy amin'ny faritry ny lavaka fampindramam-bola mifanila aminy; Fanesorana ny enta-mavesatra ao amin'ny toeram-pitrandrahana mba hiomanana amin'ny vato fitrandrahana; Fananganana trano fitehirizana sy fikojakojana fanampiny amin'ny fitrandrahana fitaovana sivily. Ny asa fandavahana sy fanapoahana vato ao amin'ny fitrandrahana vato dia hanomboka amin'ny volana Jolay ary amin'ny volana Aogositra ny fanodinana vatolampy. Hanomboka amin'ny volana Novambra ny fanodinana vatolampy ho an'ny fananganana an'i Groyne No. 4. -tapitra-
Notsongaina avy amin'ny tantaran'ny fonon'ny World Dredging Mining & Construction